2 Korintofo 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nea Ɛto So Abien A Ɔde Kɔmaa Korintofo 5:1-21
Yɛbɛhyɛ ɔsoro tenabea (1-10)
Ɔsom adwuma a ɛma nnipa siesie wɔne Onyankopɔn ntam (11-21)
Abɔde foforo (17)
Kristo ahemmɔfo (20)
5 Na yenim sɛ, sɛ wodwiriw yɛn fi a ɛwɔ asaase so yi gu, kyerɛ sɛ, sɛ wodwiriw saa ntamadan yi gu a,+ yebenya ɔdan bi a efi Onyankopɔn hɔ. Ɛyɛ ofi a wɔamfa nsa ansi+ a ɛwɔ hɔ daa wɔ soro. 2 Na ofi* yi mu na yesũ di awerɛhow wɔ yɛn mu, na yɛhwɛ kwan denneennen sɛ yɛbɛhyɛ nea ɛyɛ yɛn dea* a efi soro*+ no, 3 sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yenya hyɛ a, yɛrenna adagyaw. 4 Nokwasɛm ne sɛ, yɛn a yɛte ntamadan yi mu no, yesũ di awerɛhow wɔ yɛn mu, na nneɛma hyɛ yɛn so. Efisɛ yɛmpɛ sɛ yɛworɔw eyi gu hɔ, nanso yɛpɛ sɛ yɛhyɛ baako no,+ sɛnea ɛbɛyɛ a nkwa bɛmene nea ewu no.+ 5 Na Onyankopɔn ne nea wasiesie yɛn ama eyi.+ Ɔno na ɔde honhom no ama yɛn sɛ nea ɛbɛba no ho adanse a edi mu.*+ 6 Enti yɛwɔ akokoduru daa, na yenim sɛ bere dodow a nipadua no yɛ yɛn fi no, yenni Awurade nkyɛn,+ 7 efisɛ yɛnam gyidi mu, na ɛnyɛ nea yehu mu. 8 Nanso yɛwɔ akokoduru, na yɛn ani gye ho sɛ yebefi nipadua mu na yɛne Awurade akɔtena.+ 9 Enti sɛ yɛwɔ ne nkyɛn oo, yenni ne nkyɛn oo, yɛde yɛ yɛn botae sɛ yɛbɛsɔ n’ani. 10 Na ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa kopue* Kristo atemmu agua no anim, na nea obiara yɛe bere a ɔwɔ nipadua mu no, papa oo, bɔne oo, wanya so akatua.+ 11 Enti esiane sɛ yenim Awurade suro nti, yɛkɔ so ne nnipa kasa ma wogye yɛn di, nanso Onyankopɔn de, onim yɛn yiye.* Na migye di sɛ mo ahonim* nso nim yɛn yiye.* 12 Ɛnyɛ sɛ yɛredi yɛn ho adanse akyerɛ mo bio, na mmom yɛrema mo nea mubegyina so ahoahoa mo ho wɔ yɛn ho, sɛnea ɛbɛyɛ a, wɔn a wɔmfa nea ɛwɔ komam nhoahoa wɔn ho,+ na mmom wɔde nea aniwa hu hoahoa wɔn ho no, mubenya biribi ama wɔn mmuae. 13 Na sɛ yɛabɔ dam+ a, yɛabɔ ama Onyankopɔn; na sɛ yɛn adwenem da hɔ a, emu da hɔ ma mo. 14 Na ɔdɔ a Kristo wɔ no hyɛ yɛn, efisɛ nea yɛahu ne sɛ, ɔbaakofo wu maa obiara;+ ɛno nti obiara awu. 15 Na owu maa obiara, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn a wɔte ase no rentena ase mma wɔn ho bio,+ na mmom wɔbɛtena ase ama nea owu maa wɔn na wonyan no no. 16 Enti efi saa bere yi rekɔ no, yennim obiara wɔ honam mu.+ Sɛ mpo, na yenim Kristo wɔ ɔhonam mu a, afei de, yennim no saa bio.+ 17 Enti sɛ obi wɔ Kristo mu a, na ɔyɛ abɔde foforo;+ nneɛma dedaw no atwam; hwɛ! nneɛma foforo na aba. 18 Na nneɛma nyinaa fi Onyankopɔn hɔ. Ɔno na ɔnam Kristo so asiesie yɛne no ntam,+ na wama yɛn ɔsom adwuma a ɛma nnipa siesie wɔne no ntam,+ 19 kyerɛ sɛ, Onyankopɔn nam Kristo so resiesie Ɔne wiase bi ntam;+ ɔremmu wɔn mfomso ngu wɔn so.+ Na ɔde ahyɛ yɛn nsa sɛ yɛnka asɛm a ɛbɛma nkurɔfo asiesie wɔne no ntam.+ 20 Enti yɛyɛ ahemmɔfo*+ a yesi Kristo anan,+ te sɛ nea Onyankopɔn nam yɛn so resrɛ nnipa. Yegyina Kristo ananmu resrɛ sɛ: “Momma wonsiesie mo ne Onyankopɔn ntam.” 21 Nea na onnim bɔne+ no, ɔde no yɛɛ bɔne* maa yɛn, na yɛnam no so ayɛ atreneefo wɔ Onyankopɔn anim.*+
^ Anaa “tenabea.”
^ Anaa “yɛbɛhyɛ yɛn tenabea.”
^ Anaa “yɛn soro tenabea.”
^ Anaa “sika a wɔde to biribi ase (ntoase); nea ɛbɛba akyiri yi ho anohoba (bɔhyɛ).”
^ Anaa “wɔda yɛn nyinaa adi.”
^ Anaa “wɔada yɛn adi akyerɛ Onyankopɔn.”
^ Anaa “wɔada yɛn adi nso akyerɛ mo ahonim.”
^ Anaa “ɔhene ananmusifo.”
^ Anaa “bɔne ho afɔre.”
^ Anaa “ayɛ Onyankopɔn trenee.”
2 Korintofo 5